EyeKhala 16, 2018 admin
New York likhupha crypto BitLicense ku BitPay
iprosesa intlawulo Cryptocurrency BitPay liye laba ngokuqinileyo 8 ukufumana i "BitLicense" evela New York Department of Iinkonzo zeMali, eliliso oko kunjalo sikhokelo-level karhulumente kakhulu-yesithintelo kwishishini cryptocurrency US.
Inkqubo imvume wawuquka "uhlolo olupheleleyo" olwa-imali ngokungekho semthethweni yinkampani leyo, lokulwa ubuqhetseba, zeemali, ukhuseleko lwabathengi, kunye nemigaqo-nkqubo lokhuselo. ngoku ezimele iprosesa yentlawulo BitPay ezinokuzisebenza iintlawulo cryptocurrency zabathengisi New York kunye nabahlali, kwaye ilayisenisi kananjalo ligunyazisa inkampani ukuba akhuphe amakhadi debit cryptocurrency-ezixhaswa ngurhulumente.
G20 egadile ukhulule framework “zivule” esweni crypto
the Uzinzo Board Financial (FSB), umbutho sigxile ekuhlaziyeni nokwenza izindululo G20 kwiinkqubo zezimali ehlabathini, siye isakhelo esweni impahla cryptocurrency ukuba “kufuneka kunceda ukuchonga nokunciphisa imingcipheko ukuba abathengi kunye umtyali protection, ukuthembeka market, futhi ukuba uzinzo kwezemali.”
iinzame I FSB yokuhlola liya kujolisa asethi crypto’ ixabiso hexa, ukusetyenziswa ngokubanzi crypto xa iintlawulo kunye exposure kwamaziko, kwakunye hexa emarikeni xa kuthelekiswa igolide, ezimali kunye equities.
platform yimali yorhwebo blockchain Hong Kong ukuba kwakgqitywa ngoSeptemba
I-Hong Kong Monetary Authority (HKMA), de facto yebhanki Chinese ummandla izimele xa central, silungele ukwenza ngokusesikweni iqonga live yimali yorhwebo blockchain phakathi kweenyanga ezimbini.
“I-Trade Finance Platform yiprojekthi blockchain eqaliswe 7 iibhanki e Hong Kong. Le projekthi sele kuququzelelwa yi-HKMA kwaye Kucetywa sungula ngoSeptemba 2018.”
platform blockchain I HKMA iye 21 iibhanki ezithatha inxaxheba abe ziindawo ekudityanwa inxaxheba, kuquka HSBC and Standard Chartered.
Le projekthi umgudu ukuze elubala ukuba ukwabelana datha amaziko ezemali.
Thailand liceba “Bond Coin” yokukhula izibambiso yokuhlala
Umbutho self-esemthethweni Thailand uceba ukwenza umqondiso isiko ejoliswe ukuba akhawulezise yequmrhu bond zokuhlala kweli lizwe.
I-Thailand Bond Market Association (TBMA) wathi kokuba kunikwe ukhanyo beKhomishini Securities and Exchange Thailand ukuba ukuphuhlisa blockchain labucala nto leyo eza kuba lula kuphela amaqela kwimarike isibopho, ezifana benkampani ebhalisiweyo, abatyali-mali kunye nemibutho elinguvimba.
Iqonga blockchain-based kukuba kuhlu kunye nokwabelana bond ulwazi, ezifana amazinga enzala ngendlela asasaza, kwaye kwenza needipozithi bond.
I TBMA yabonisa ukuba uza nayo ubiza ntoni a “lwemali bond” phezu kweqonga blockchain ukuba tokenize asethi ukususwa kokwaziswa kunye nokuhlaliswa.
Chaitat Prachuabdee, usekela mongameli we TBMA, uthe ulwakhiwo olutsha kulindeleke ukuba ukuphucula elubala kolwazi iqhina lwembumba kunye ngokumandla ukunqumlela ixesha intengiselwano ukusuka kwiintsuku 7-10 yangoku ukuya kwiintsuku nje 1-3.
American Express iifayile igunya lokwenza blockchain-based ubungqina-of-mali technology
Credit card giant American Express ufuna ilungelo elilodwa lomenzi wechiza ukuba ubungqina-of-yentlawulo inkqubo blockchain-based.
Isicelo patent ithi ukuba American Express ezinika Iinkonzo eziyeleleneyo iza kusetyenziswa inkqubo blockchain-enikwe ukufumana "isiqinisekiso sentlawulo kubandakanywa imali eyeyeetranzekshini kunye isibonisi yomthengisi."
AmEx ithi ukuba bekuya kuba inkqubo blockchain ikakhulu yoluntu eza kunceda ekugcineni "Iinkcukacha zentengiselwano, data isivumelwano, ubungqina-of-mali data, data yesazisi, kunye / okanye nezinye iinkcukacha njengoko oyifunayo. "Le nkampani ithi inkqubo blockchain yoluntu iya kubonelela umaleko eyongezelelweyo bubungqina kuzo zonke iintengiselwano ezenzeka network AmEx ngayo.
Schnorr ngomumo ukuba utshintsho olukhulu Bitcoin ukususela SegWit
Kophuculo Schnorr Bitcoin wathabatha inyathelo elibalulekileyo ukuphunyezwa kwiveki yokugqibela, xa developer abanempembelelo Pieter Wuille uyayihlaza idrafti echaza wenziwe zobugcisa.
Ingcamango uphucula kwaqaliswa nobumfihlo cryptocurrency sixabisekileyo ehlabathini.
ngempumelelo, oku ubeka Schnorr njengoko utshintsho elandelayo enkulu ku Bitcoin, ithetha ukuba iya kuba utshintsho ikhowudi inkulu ukususela wokuhlaliswa Ubungqina (ilandelwe).
Kwinqanaba lobuchwepheshe, idibanisa inkxaso Schnorr scheme usayino lwedijithali kukunika abasebenzisi Bitcoin indlela entsha ukujikelezisa izitshixo eziyimfuneko lokufihla esetyenziselwa ukugcina ukuthumela Bitcoin.
$6kuthiwa umphathi imali T BlackRock uphonononga Bitcoin zotyalo
umphathi inkulu ehlabathini asethi, BlackRock, kubikwa ukuhlola Bitcoin ukuqinisekisa ukuba inkampani kufuneka imali Bitcoin amakamva.
Blackrock ilawula izigidi zeerandi asethi kumaziko Wall Street, zimali ngamanye kunye neziseko. Enye amashishini wayo ongundoqo kukuba ukukhonza iingcali - oogqirha, abameli, ootitshala Main Street - ngokuthi imfuyo yabo.
BlackRock Kuxelwe kusekwa iqela zomsebenzi ukuba liphanda indlela Blackrock "Ungathatha ingqalelo yemarike cryptocurrency ngokukhawuleza-ikhula."
Ingxelo Daily Market Kraken for 15.07.2018
$64.1M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin! Last d...
Tayna Felipe uthi:
EyeKhala 30, 2018 e 5:50 AM